Inona avy ireo fitaovana ilaina amin'ny fifaninanana? Semalt Biedt De Antwoorden
Raha te-hifehy ny tranonkala ianao, dia mila manomboka amin'ny zavatra hafa ianao mba hitadiavanao ireo mpitsidika amin'ny tranonkala vaovao. Raha fantatrao ny SEO-finday izay tena ambony dia mamorona SEO-strategie creations izay manatsara ny fifaneraseranao hafa amin'ny tranonkala hafa, ka ny fampiasana ny fikarohana sy ny fiheverana hafa. Ny fanadihadiana avy amin'ny SEO dia manampy anao hahita ireo tombontsoa avy amin'ny tranonkala fifaneraserana sy ny fifaninanana vaovao mba hampivelatra kokoa ny fampivoarana ny fahadisoan'ny mpifaninana.
Lisa Mitchell, Mpanantanteraka Success Manager Semalt Digital Services, dia nanapa-kevitra ary hanaparitaka izay fomba ampiasaina hampiasana ny fitadiavam-bola SEO.
Fantaro ireo zo ireo mba hamakafakana raha te hampiasa
Ny tena mahavariana dia tsy afaka manara-maso ny SEO-mpanjifa izay mora sy mora azo. Izy ireo dia maro ny fitaovana ampiasaina toy ny SimilarWeb, SEMRush sy SpyFu mba hahafantarana ireo zo hifanaraka aminao mba handraisana anjara. Ny fampiasana ny tranonkala-URL amin'ny fifaninanana ary ny fampiasana ny zo amam-pitaovana rehetra, ny lohahevitra momba ny fifaninanana eo amin'ny sehatra, ny haino aman-jery sy ny hafa.
SEMRush no fitaovana tsara indrindra satria ny mpividy ary ny ankamaroan'ny data dia manome.
Ny fitaovana tsara indrindra ahafahana mametraka ny lisitry ny tranonkala hahita ny vokatra vokarina dia ny AWR Cloud. Ity fitaovana ity dia manome anao koa ny lohahevitry ny trendsites ary ny laharana voalohany. Inona no antony? Amin'ny alàlan'ny fampiharana ny programa, ny sora-baventy sy ny URL, dia alefa amin'ny .xls-taratasy fanadihadiana.
Ga by Top Ranking Sites
Rehefa manana tranonkala ambony indrindra ianao, dia tokony ho hita ao an-tsainao ny mampiasa ny SEO manan-danja indrindra:
Tadiavo ny tenimiafina hampiasainao amin'ny fampiasana ny SEO-teny tianao ampiasaina amin'ny lohatenin'ny pejy.
Ny adiresy an-tserasera dia miompana amin'ny pejy fanangonan-tserasera
Ontdek hoe ny inhoud dia gestructureerd, d.w.z.
Ny varavarana dia nahita ny tranokala avy amin'ny mpifaninana noforonina, dia ny mahatsara ny marika mahazendana avy amin'ny mpifaninana.
Contrôle de rôle de vêtements contre
Ny fahazoana ireo tranonkala hafa mba hiverenana aminao dia maro ny SEO miasa. Ny fanaraha-maso ny orinasan-tserasera mba hifaneraserana amin'ireo tranonkala hafa dia ny fomba tsara kokoa hampiroboroboana ny backlinks.
Ny SEO fitsaboana tsara indrindra dia manana ny lisitry ny fitaovana rehetra azo ampiasaina, ary afaka mampiasa izany ianao mba hijerena ny karazan-tsarimihetsika ao amin'ny tranonkalan'ny mpifanaraka aminao, raha te hiditra amin'ny sehatr'asa, ny tranokala ary ny ankertekst.)
Ny fampiasana an'i Moz ao amin'ny tranonkalan'ny tranonkala
Ny SEO dia miendaka am-panambadiana, miaraka amin'ny anarana mitahiry ireo karazana algoritains izay tsy mety. Ity fifaninanana ity dia hiverina, ary tsy ho mora ny hisongadina. Ho hitanao ato ny tranonkala sy ny SEO-prestaties izay hanampy anao hifanaraka amin'ny fampiasana fifaninanana.
Mitovy amin'ireo fitaovana ireo ny fahatapahan-jiro mivaingana ny mpandray anjara anao mba hahafantarana anao izay tokony hampihena na hamerenana. Manana anao koa izy mba hiantsoana ny dikanteny sy ny tranonkalanao Source .